· 1 Tantara
o 1.1 Mponina voalohany (500 Talohan'i JK - 1500 Taorian'i JK)
§ 1.1.1 Fiaviana aostrôneziana iraisana : Vahoaka Ntaolo
§ 1.1.2 Fipetrahana : ny Vazimba ary ny Vezo
· 2 Politika
o 2.1 Fahefana mampihatra ny lalàna
o 2.2 Fiarovana
· 3 Fiteny
o 3.1 Ny teny malagasy
o 3.2 Ny fiteny vahiny
· 4 Faritany
· 5 Demografia
o 5.1 Isan'ny mponina
§ 5.1.1 Isan'ny mponina teo anelanelan'ny taona 1921 sy 1960
§ 5.1.2 Isan'ny mponina teo anelanelan'ny taona 1950 hatramin'ny taona 2010 
· 6 Fiarahamonina
o 6.1 Fanabeazana
o 6.2 Fananahana
· 7 Jeografia
o 7.1 Ireo farihy lehibe sy ny velarany (ha) tamin'ny taona 1960
o 7.2 Vohontany
o 7.3 Toe-tany
· 8 Toe-karena
o 8.1 Banky
o 8.2 Vola baiko
o 8.3 Fambolena
o 8.4 Fahantrana
§ 8.4.1 Ny vary
o 8.5 Tanjona ho an'ny ho avy
· 9 Hai-kanton'i Madagasikara
· 10 Fety sy andro tsy fiasana
· 11 Vangio koa
· 12 Rohy ivelany
· 13 Madagasikara an'isa
· 14 Lahatsoratra Ilaina
Voalaza ara-tantara fa i Madagasikara dia isan'ny ilabolan-tan'ny Gondwana, ary nitriatra tamin'ny Afrika 160 tapitrisa taona lasa izay. Nanomboka teo amin'io fivakisana io no niforona ny Nosin-tan'i Madagasikara rehefa avy nisaraka tamin'ny India 80 na 100 tapitrisa taona lasa izay. Maro ny mpikaroka sy mpahay tantara no milaza fa teo ho eo amin'ny 200 taona T.J.K. (taorian'i Jesosy Kristy) no tonga teto madagasikara ny olona mpifindra monina voalohany. Araka izany dia voalaza fa avy any Azia Atsinana (indonezia) no fiavian'ireo mpifindra monina ireo. Teo koa ny fahatongavan'ny Araboavy amin'ny fianakavian'i Mohameda, ny Indianina ary ny Jiosy babo avy tany Babilona. Ary teo koa (angamba) araka ny voalazan'ny mpandinika vitsivitsy ny fifindran'ireo Afrikanina izay mbola Arabo (Mozilmana) razana ihany koa. Ary taty aoriana no nisy olona avy any Tonga no tonga tao amin'ny nosy malagasy.
Mponina voalohany (500 Talohan'i JK - 1500 Taorian'i JK)[hanova | hanova ny fango]
Fiaviana aostrôneziana iraisana : Vahoaka Ntaolo[hanova | hanova ny fango]
Tsy tanteraka ny zavatra fantatra mikasika ny fipetrahan'ny olona tao Madagasikara, fa araka ny karoka ary ny asa nataon'ireo mpahay jenetika, haitsikerafiteny ary tantara, dia aostrôneziana ny tena fiavian'ny Malagasy, izay avy amin'ny tambanosy indoneziana. Mety tonga tao Madagasikara ireo olona ireo tamin'ny alalan'ny lakana (waka) tamin'ny taonjato voalohany taorian'i JK, na telonjato talohan'i JK, araka ny arkeôlôgy, ary talohan'ilay daty farany voalaza araky ny lazain'ny jenetisianina. Ireo olona ireo dia antsoina Ntaolo, izay avy amin'ny fteny Prôtô-Malay-Polinezianina *tau-ulu izay midika "olona voalohany", avy amin'i *tau 'olona" ary *ulu, izay midika "loha", "fiaviana", "fitombohana". Miantso an'ny tenany ho *va-waka" "olon'ny lakana" io mponina tonga tao Madagasikara voalohany io. "*va-waka" izay avy amin'ny teny *va"mponina" ary *waka "lakana"; teny izay niavian'ny teny vahoaka.
Manazava ny endriky iraisan'ny Malagasy ny fiaviana aziatika tatsimo atsinanan'ny razambeny : tso-bolo, tsy mainty hoditra ohatra ny afrikanina "banto". Ny vahoaka ntaolo" dia nampandova ny :
· Teny malagasy, izay teny iraisana manerana ny nosy; izay mizara fototeny maro amin'ireo teny Barito ary ny teny Dayak izay tenenina ao atsimon'ny Borneo toa ny fiteny ma'anyan izay teny be fitovizana indrindra amin'ny fiteny malagasy.
· Fomban-drazana iraisana iraisana amin'ny aostrônezianin'i Taiwan, nosin'i Pasifika, Indonezia, Filipina ary Zelandy Vao, toa ny fambolena saonjo, akondro, voaniho, fary; fampiasana zavamaneno toa ny sodina (malay suling) ny valiha, sns.
Fipetrahana : ny Vazimba ary ny Vezo[hanova | hanova ny fango]
Tonga avy amin'ny amorontsiraka atsimo atsinanan'ny nosy ny olona voalohany, na dia mety tonga avy tany Avaratra aza ny olona voalohany. Tam-pahatongavana, manao ny fanaovana tavy no nahafahan'ny mponina voalohany mamboly amin'ny alalan'ny fandringanana ny ala teny amin'ny amorontsiraka.
Tamin'ny taonjato fahafito taorian'i JK, dia nanomboka nanadio ny alan'ny afovoantany ny sasany amin'ireo vahoaka ntaolo ireo. Ireo tany malalaka vokatry ny fandringanana ny ala ireo dia nambolena vary sy saonjo. Ireo vahoaka ntaolo ireo izay nifidy ny nipetraka tanaty ala dia nantsoina vazimba (avy amin'ny teny *va-yimba izay avy amin'ny teny *yimbamidika "ala"). I Rafandrana, razamben'ny mpanjaka Merina dia fantatra fa Vazimba. Rafohy ary Rangita izay mpanjaka Merina dia fantatra fa Vazimba ihany koa.
I Madagasikara dia repoblika ahitana antoko politika miisa 312. Ny filoha no mitondra ny firenena ary ny praiminisitra no mitondra ny governemanta. Ny governemanta no mampihatra ny lalàna.
Neken’ny mpandatsa-bato malagasy ny lalàm-panorenana novaina tamin’ny 1998.
Tamin’ny fomba tsy dia natao hoe ara-dalàna, naka ny fahefana i Andry Rajoelina nandritry ny fikorontanana nitranga tamin’i taona 2009 taorian’ny fialàn’i Marc Ravalomanana, ary taorian’ny fakan’i Andry Rajoelina ny fahefana, nanohy ny fanomezan-dalan’i Marc Ravalomanana izy na dia tsy lany tamin’ny latsabato ataon’ny daholobe aza. Ny tena marina, raha tena nisy ny tetezamita, ny miaramila no tokony nitondra azy : izany hoe izy manana ny mari-boninahitra avo indrindra ao amin’ny Tafika. Ary roa volana aorian’ny tetezamita, misy ny fifidianana ny filoham-pirenena. Voarara any Madagasikara ary manerana izao tontolo izao ilay fakan’i Andry Rajoelina fahefana izany hoe manohy ny fanomezan-dalan’ny filoham-pirenena lanin’ny latsabato.
Ireo fanjakana naorin’ny foko toa ny Sakalava, ny merina ary ny foko hafa n manorona ny tafika voalohany tao Madagasikara. Nampiasa lefona izy ireo fa taty aoriana dia nampiasa basilava, tafondro ary fitaovam-piadiana mampiasa vanja hafa. Tany am-piandohan’ny taonjato faha-19 dia saika nanjaka eraky ny nosy ny mpanjaka Merin’ny Fanjakan’i Madagasikara, tamin’ny alalan’ny tafika ahitana olona telo alina tsara ofana ary tsara fitaovana. Nahatonga an’ny priminisitra Rainilaiarivony hangataka fanampiana amin’ny britanika momba ny fiofanana ny tafika Merina ny fanafihan’ny frantsay ny tanàna eo amin’ny amorontsiraka. Na dia nisy aza ny fiofanana sy ny fahaizana nentin’ny britanika, nilefitra noho ny fanafihan’ny tranon’ny mpanjaka tao Antananarivo ny tafika malagasy. Lasa zanatany frantsay i Madagasikara nanomboka tamin’ny 1897 hatramin’ny taona 1960.
Ny minisitry ny Atitany no manana ny andraikitra amin’ny fitantanana ny herin’ny polisy, ny zandarimaria ary ny polisy miafina. Voatantana eo an-toerana ny polisy sy ny zandarimaria. Na dia izany aza, latsaky ny ampahatelon’ny kaominina rehetra no afaka nandray ny asan’ny mpitandro ny filaminana, ary tsy ampy indrindra ireo foibe an-toerana ho an’ireo vatam-piarovana ireo. Ny fitsaram-piarammoniia nentim-paharazana izay antsoina hoe dina dia tarihin’ny olona hajaina ary eflehibe rehefa eny ambanivohitra izay tsy ahitana ny mari-piatrehan’ny fanjakana.
Tamin’ny tantaran’i Madagasikara, dia somary tsara ihany ny fiarovana manerana ny nosy. Ambany ny tahan’ny herisetra sy ny heloka bevava raha oharina amin’ny firenena mitovy mari-pivoarana. Ny halatra sy halatra miaraka amin’ny fivarotan-tenan’ny ankizy no ankamaroan’ny heloka bevava miaraka amin’ny fanambarana ary fivarotana rongony sy zavatra hafa mahadomelona Ny fifintinan’ny teti-bola nanomboka tamin’ny 2009 dia nanana fiantraikany mafy tamin’ny polisim-pirenena izay nahatonga ny heloka bevava hitombo taty aoriana
Ny Teny Malagasy dia misokajy ao anatin'ny fiteny aostronezianina, iray tarika amin'ny fiteny malayo-polinezianina miaraka amin'ny Tagalog (fiteny filipina) ny Malay-indonezianina, ny javaney sns.
Araka ny lalam-panorenana, ny fiteny malagasy dia fiteny ofisialy voalohan'i Madagasikara. Teny iray tsy mivaky sady azon'ny vahoaka malagasy manerana ny Nosy ny fiteny malagasy ofisialy. Araka ny statistika, ny teny malagasy ofisialy ary ny tenim-paritr'i Madagasikara no tena hain'ny mponina malagasy tenenina. Eo amin'ny valopolo isan-jaton'ny (80%) malagasy monina ao Madagasikara no tsy mahay teny afatsy teny malagasy. Ireo olona tsy mahay afatsy teny malagasy ireo amin'ny ankapobeny dia olona miaina any ambanivohitra. Amin'ny resaka haino aman-jery dia io fiteny io no teny voalohany ampiasaina ao Madagasikara. Tsy dia isian'ny teny malagasy loatra ny Aterineto, izay ahitana loharanom-pahalalana kely dia kely raha oharina amin'ireo fiteny eoropeana lehibe (frantsay, anglisy...). Ny antony dia ny tsy fahitana na ny havitsin'ireo mpamatsy tranonkala amin'ny teny malagasy, ary ny havitsian'ny tahan'ny olona manana Aterineto amin'ny isam-ponin'i Madagasikara.
Ireo firenena ao amin'ny Frankofonia
Nisy fiantraikany tamin'ny teny malagasy ny tenin'ireo vahiny nifandray tamin'ny malagasy hatramin'izay. Nisy fiantraikany ohatra ny teny anglisy (amin'ny fampidirana teny vaovao toa ny sokodrevo, lefitra, raitra...). Ary ny teny frantsay, izay teny ofisialin'ny firenena nanjanaka an'i Madagasikara nandrintry ny enimpolo taona.
Noho izany dia nisy fiantraikany koa ny teny frantsay teo voambolan'ny fandraharahana (sendikà, politika, distrika) ary koa amin'ny lafin'ny haianarantany ao Madagasikara : ka na dia nogasiana aza ny ankamaroan'ny anaran-tany ary ny anaran-tanàna ao Madagasikara, mbola ampiasain'olon-tsasany (indrindra indrindra ireo manam-pahaizana izay nianatra teny amin'ny fianarana miteny frantsay) ny anarana frantsay ny tanàn-dehibe toa i Toamasina (Tamatave), Mahajanga (Majunga),Antsiranana (Diego-Suarez)...
Ny fiteny vahiny ianarana indrindra ao Madagasikara dia ny fiteny frantsay. Io – ary io ihany – no fiteny ampiasaina amin'ny fianarana ambony ary amin'ny fianarana frantsay ao Madagasikara. Izy io ihany koa no teny ampiasain'ireo mpamoaka lalàna. Nanomboka ny taona 1896 izay daty nivadihan'i Madagasikara ho zanatany frantsay, ny fiteny frantsay no fiteny ofisialy ary ampiasaina amin'ny lafin'ny fandraharahana ary saika mitovy lanja amin'ny teny malagasy izy io amin'ny fiainana politika.
Ireo firenena izay mampiasa ny teny anglisy ho teny ofisialy
Manaraka ny fiteny frantsay dia tonga ny fiteny anglisy. Ny antony ianarana ny teny anglisy ao am-pianarana amin'izao fotoana izao dia noho ny fianjadiana eran-tanin'ireo firenena miteny anglisy toa an'iEtazonia ary ny Firenena Mitambatra. Ankoatr'ireo firenena roa ireo dia ahitana ireo firenena avy ao Afrika Atsimo sy Atsinana, (afatsy iMozambika), ireo firenena any Azia Atsimo ary Azia Atsimo Atsinanana (Indonezia, Tailandy), ary i Aostralia. Heverina koa fa ny teny anglisy no teny fampiasa amin'ny varotra iraisam-pirenena ary amin'ny siansa ary ny raharahan'ny teknolojia vaovao.
Tsy fitenin'ny mpanjanatany ny teny anglisy ka tsy mira amin'ny teny frantsay ny lanjany ary ny fianjadiany. Kanefa noho ny fitiavan'ny filoha taloha Marc Ravalomanana ny anglisy ary noho ny fianjadiana eran-tanin'ny firenena toa i Etazonia, ny fianjadiana ara-paritr'ireo firenen'i Afrika ary ny firenena lehiben'ny Ranomasimbe Indianina ary koa ny fiparitahan'io fiteny io erak'izao tontolo izao, dia nataony ho teny ofisialy ny teny anglisy tamin'ny taona 2007, miaraka amin'ny teny frantsay ary malagasy ary lany tamin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka. Tamin'izany taona izany, latsaky ny 5% no lanjan'isan'ireo malagasy afaka mifandray amin'io fiteny io. Tamin'ny nahatongavan'i Andry Rajoelina teo amin'ny fahefàna, dia nesorina tsy ho teny ofisialy intsony ny teny anglisy.
Faritany[hanova | hanova ny fango]
Nizara ho faritany enina (6) i Madagasikara hatramin'izay: Antsiranana, Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina ary Toliara.
Araka ny fiovana nisy anefa, nanomboka ny taona 2004, dia nozaraina ho faritra 22 i Madagasikara. Ireto avy ireo faritra22 ireo miaraka amin'ny isan'ny mponina tamin'ny 2004:
Lah, Anarana Reniv, Mponina Velarana(km²) Hab, Mponina
Diana Diego I 485 800 19 266 25,2
Sava Sambava 805 300 25 518 31,6
Itasy Miarinarivo 643 000 6 993 91,9
Analamanga Antananarivo-Renivohitra 2 811 500 16 911 166 3
Vakinankaratra Antsirabe I 1 589 800 16 599 95,8
Bongolava Tsiroanomandidy 326 600 16 688 19,6
Sofia Antsohihy 940 800 50 100 18,8
Boeny Mahajanga I 543 200 31 046 17,5
Betsiboka Maevatanana 236 500 30 025 7,9
Melaky Maintirano 175 500 38 852 4,5
Alaotra-Mangoro Ambatondrazaka 877 700 31 948 27,5
Atsinanana Toamasina I 1 117 100 21 934 50,9
Analanjirofo Fenerive Est 860 800 21 930 39,3
Amoron'i Mania Ambositra 693 200 16 141 42,9
Matsiatra Ambony Fianarantsoa I 1 128 900 21 080 53,5
Vatovavy-Fitovinany Manakara 1 097 700 19 605 56,0
Atsimo-Atsinanana Farafangana 621 200 18 863 32,9
Ihorombe Ihosy 189 200 26 391 7,2
Menabe Morondava 390 800 46 121 8,5
Atsimo-Andrefana Toliara I 1 018 500 66 236 15,4
Androy Ambovombe Androy 476 600 19 317 24,7
Anosy Taolagnaro 544 200 25 731 21,1
Isan'ny mponina isam-paritra ny taona 2008-211
Madagascar 19 071 811 19 601 026 20 142 015 20 696 070
Ny mponina malagasy mipetraka eo anivon-tany sy eny amin'ny morontsiraka atsinana dia mety avy any Azia, ary ny mponina mipetraka any avaratra dia mety avy any India na avy any Afrika Avaratra. Araka ny dinika natao vao haingana, mety tsy nisy olona nipetraka tao Madagasikara raha tsy tany amin'ny taonjato faha folo tany ho any. Teo ny Aostroneziana (avy any Indonezia) no mety tonga. Ankehitriny, mponina malagasy no mipetraka any amin'ny tamba-nosin'ny Kômôro (Moheli, Mayotte, Nzwani) sy any La Réunion.